Semalt: Aza kivy noho ny Adware na ny malware
Mety hampidi-doza indraindray ny fametrahana ny fampitahana sy ny fanampim-pitaovana tsy misy fampitandremana. Raha tsy misy ny mitandrina na tsia rehefa maka ampidirina ao anaty navigateur izy ireo, dia mila mandinika ny toerana misy ny fanampiana azy ireo amin'ny fomba tsara.
Miresaka momba ny fomba hisorohana ny fananganana ny fampidiran-dresaka mampidi-doza i Oliver King, mpitantana ny Success Success of Semalt .
Nisy lahatsoratra iray mahaliana nivoaka tao amin'ny tranonkala izay nilaza fa misy mpisera anaty aterineto mampiasa fampitaovana amin'ny Internet mba hijerena ny hafa. Ho an'ny olona iray tsy mahay tsara ny fomba fiasan'ny aterineto, dia mety ho tonga ho azy ireo ny fahatairana. Na izany aza, lasa ny andro izay misy ny fanitarana madio sy ilaina ao amin'ny tranonkala. Ireo orinasa miaraka amin'ny antony manjavozavo dia nanadio azy ireo teo amin'ny tsena. Ny fanitarana tanjona dia ireo malaza amin'ny mpampiasa maro. Amin'ny alalan'izany fomba izany dia afaka manangona vaovao maro avy hatrany izy ireo
Ireo orinasa ireo dia afaka manampy ny fikajiana ny baiko amin'ireto fanitarana ireto ary manara-maso ireo hetsika ataon'ny mpitsidika na manery dokambarotra popup amin'ny mpampiasa tsy fantatra. Ireo mpikirakira dia manavao ny fanitarana azy tsy tapaka izay mahatonga azy ho sarotra ny mahafantatra raha misy olon-dratsy olon-kafa manana fahefana amin'ny rafitra.
Ankehitriny, manam-pahaizana dia mbola tsy tonga amin'ny fomba voafaritra tsara ny manavaka ny fanitarana ara-dalàna sy tsy ara-drariny. Ny antony dia tsotra..Tsy misy fomba hitenenana ny fanitarana hafa izay tsy misy. Na izany aza, noho ny HTG, ireo mpikaroka dia manohy ny famerenana ny fanitarana ny tsirairay mba hamaritana raha misy malware izy ireo na tsia.
HTG dia manana lisitra ampahibemaso momba ny fampahalalam-baovao malaza rehetra sy malware. Mba hahafantarana ny toeran'ny fanitarana dia tsy maintsy mametraka izany amin'ny lisitra izany. Raha te hijery ireo fikandrana amin'izao fotoana izao dia tsindrio ny safidin-tserasera ary mandehana mankany amin'ny rindrina eo ankavia.
Hanala ny iray, tsindrio ny boaty entana na esory manontolo izany. Raha toa ka hita ao amin'ny lisitra mainty ny fanitarana, esory avy hatrany avy any amin'ny rafitra izy. Na izany aza, ExtShield for Chrome dia mijery ny fanitarana rehetra azo alaina ary mametraka ireo tra-pahavoazana avy amin'ny lisitra mainty.
Fiarovana amin'ny Chrome
Ny iray dia mampiseho ny fahazoan-dàlana izay efa misy eo amin'ny rafitra. Manohy manara-maso ny fanaka rehetra sy ny fitondran-tranonkala amin'ny hoavy izy ary raha maneho ireo mariky ny fikasana ratsy. Ny mpandrindra ho an'ny fiarovana koa dia mikasa ny hamorona sehatra iray izay mampahafantatra ny mpampiasa rehefa manova ny fananana ny fanitarana na oviana na oviana izy io dia manomboka manao hafahafa. Ny iray hafa antsoina hoe Defender Defender ao amin'ny trano fivoarana Chrome dia manana ny asany ihany koa, saingy amin'ny fanamarihana avo lenta kokoa noho ny fisongan'ny toe-javatra diso ao ExtShield.
Tahaka ny fiarovan-danja ho an'ny chrome, ity Defender Extension ity dia mijery ny navigateur mitady izay adware, spyware, na malware. Miaraka amin'ny sonia vaovao ampiana isan'andro, dia mijery sy mamantatra ny tsy fahamendrehana rehetra izy, izay ahitana ireo ao anaty sy ivelan'ny tranonkala. Izy io dia manana loharanom-baovao mivelatra izay midika fa ny vahoaka dia afaka mamantatra izay fehezan'ny code rehetra amin'ny fanitarana. ExtShield dia tsy manana io endri-javatra io izay mahatonga ny olona hatoky kokoa ny Defender Defender.
Ny lisitra amin'izao fotoana izao dia fiarovana voalohany ho an'ny mpampiasa aterineto alohan'ny handraisan'ireo mpamorona azy ireo ny loza mitatao amin'ny ho avy. Noho ny tombontsoa lehibe izay ananana dia manana fahalalana betsaka izy ireo izay mahatonga azy ireo ho tanjona mety ho an'ireo hackers sy ireo olona hafa manana fikasana ratsy Source .